आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २२ गते शुक्रबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण २२ गते शुक्रबार
साउन २२, २०७८ ०५:०५ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण २२ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त ६ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणकृष्णपक्षको त्रयोदशी तिथि वेलुका ५:२५ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्दशी रहनेछ ।
मेष : गरेका काम कार्यबाट सुख सन्तोष मिल्नेछ । मित्र मिलन हुनेछ । सहयोगीको उचित साथ मिल्दा नयाँ कार्यको आरम्भ गर्न सकिनेछ । श्रमको सही रुपमा मूल्यांकन पाइनेछ । अध्ययनमा रुचि रहनेछ ।
वृष : शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगतिको संकेत देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा अरु दिनको तुलनामा लाभांश बढ्नेछ । सानो प्रयासले नै कार्यहरु बन्नेछन् । खुसीयाली वातावरण बन्नेछ । इच्छा आकङ्क्षाहरु थपिने छन् ।
मिथुन : घरायसी समस्या हल भएर जानेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । ठूलाठूला कार्य पनि बोलिकै भरमा बन्नेछन् । सामाजिक पदप्रतिष्ठा प्राप्त होला । कृति प्रदायक कार्य गरिनेछ । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
कर्कट : झन्झटिला कार्यको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ । अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा ध्यान जानेछ । आफ्नै निर्णयले आँफैलाई समस्यामा पार्न सक्छ, सजक रहनु होला । लहैलहैमा लाग्दा अनावश्यक खर्चभार थपिनेछ ।
सिंह : कलात्मक कार्यमा मन जानेछ । थालेका अधिक कार्य बन्नेछन् । आम्दानीका बाटाहरु फेला पर्नेछन् । अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ । छोटो रमाइलो यात्राको संभावना देखिन्छ ।
कन्या : पारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ । दैनिक गर्दै आएका कार्यमा समेत नयाँ तरिकाको प्रयोगले सहज हुनेछ । नोकरीमा प्रशंसा एवं नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन गाँसिनेछ ।
तुला : आर्थिक लाभ हुनेछ । अरुको सस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ । कल्याणकारी कार्यमा सहभागी भइनेछ । भाग्यले साथ दिँदा छोटो समयमा नै गरेका कार्यबाट प्रतिफल मिल्नेछ ।
बृश्चिक : गोपनीयता बाहिरीँदा विपक्षीले फाइदा उठाउने छन् । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन् । अवसर हुँदाहुँदै पनि विकल्प रोज्नाले विशेष कार्यमा पछि परिनेछ । दैनिक कार्यमा नै व्यस्थ रहनु उचित हुनेछ ।
धनु : आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ । अरु दिन विरोध गर्नेहरु पनि समर्थनमा आउँदा कार्य गर्न सहज हुनेछ । विपरीत लिंगिको सहयोगले कार्य बन्नेछ । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सरीक हुने अवसर मिल्नेछ ।
मकर : रोकिएका वित्तिय कारोवारले गति लिनेछन् । व्यवसायबाट सन्तोष मिल्नेछ । सानातिना समस्यामा नआत्तिनु होला, निरन्तर लाग्दा प्रतिफल तपाईँकै पक्षमा हुनेछ ।सामाजिक कार्यमा समेत चासो रहनेछ ।
कुम्भ : बौद्धिक कलाको प्रशंसा मिल्नेछ । सुखसुविस्ता उपभोग गर्न पाइनेछ । पढाइलेखाइमा सामान्य प्रयासले नै सिप सिक्न र बुझ्न सकिनेछ । प्रतिभाका कार्यमा विजयी भइनेछ । पारिवारिक सहयोग सद्भाव बढ्नेछ ।
मीन : सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा दिक्क लाग्नेछ । लक्ष्यमा पुग्न कडा परिश्रमको जरुरत पर्नेछ । बोलिकै कारण बन्नै आँटेका कार्यमा समेत विराम लाग्नेछ । पूर्व तयारीका साथ मातृ पक्षको सहयोगले कार्य गर्नुहोला ।